Misy Toerana Mahasambatra Ve ao Okraina? Jereo Ato Amin’Ity Sarintany Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2016 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Deutsch, Español, Ελληνικά, Português, 繁體中文, 简体中文, українська, English
Azo atoka hoe toerana mahafinaritra tokoa ny torapasik'i Sahara ao amin'ny manodidina ny tanànan'i Kyiv. Pikantsary avy amin'ny Map Me Happy.
Krizy ara-toekarena, fitokonana tsy hihinankanina, ary fanafihana ara-miaramila—izay no averin'ny Google News rehefa mitendry ny “Ukraine” ianao rehefa ao amin'ny fikaroham-baovao. Tsy hahasintona loatra ny olona handamina valizy sy hanao vakansy any Okraina ny fitantarana tahaka izany. Indraindray na ny Okrainiana aza dia manontany raha mety ny mba mijery tanàna ao Kyiv renivohitra na manomana fitsangatsanganana mandrindra ny faran'ny herinandro any an-tanàna hafa ao Okraina.
Saingy amin'izao fotoana izao misy vondrona mpanolotena iraisampirenena manangana sarintany antseraseran'ny toerana ahatsapana fahasambaran'ny olona ao Okraina.
Ny hevitra ao ambadiky ny Map Me Happy dia ny hanampy ny olona ao an-toerana sy ny mpizahantany hilatsa-pitiavana amin'ny firenena indray sy hianatra ihany koa ireo zavatra sy endritanyary maritrano mahaliana ao Okraina.
Mahafinaritra ve ny monina ao Okraina?
Resy lahatra ireo mpanorina ny sarintany ifampiresahana fa tsy ratsy araka ny tian'ny lohatenim-baovao asisika tsy akory ny toe-javatra ao Okraina. Raha tafiditra ao anatin'ny fifandirana ara-miaramila ifanaovana amin'i Rosia ny faritany atsinanana, dia lehibe tokoa ny firenena (Okraina no firenena faharoa lehibe indrindra ao Eoropa) ka zara raha tsikaritra any amin'ny faritra andrefana sy afovoany ny fifanenjanana. Ka ho fanomezana hevitra ho an'ny mpitsidika sy ny mponina ireo toerana ahafahana miala voly sy hakana aina no nahaterahan'ny Map Me Happy.
Tanàna 15 ao Okraina ankehitriny no voapetraka an-tsarintany ao amin'ny Map Me Happy. Pikantsary avy amin'ny tranonkalan'ny tetikasa.
“Mampifangaro ny zava-mahaliana ny Jeografy sy ny Mpahay maritrano ny Map Me Happy. Samy liana amin'ny tontolo iainana iorenam-ponenana sy ny setriny ara-piarahamonina aterany izahay… Ho anay dia mihoatra lavitra noho ny fananana miorim-paka, trano vaventy, fotodrafitrasa, tany ary endrika maritrano ny tanàna. Rafetin'ny anton-javatra misy dikany manokana apetraka sy ampiasain'ny tsirairay amin'ny mponina an'arivony izany tanàna izany,” hoy ny fanazavan'ny mpanangana ny tetikasa Map Me Happy.
Amin'ny ankapobeny ny sarintany dia sehatra andraisan'ny besinimaro anjara, mamela izay rehetra misoratra anarana hametraka marika “miabo” amin'ireo toerana manerana ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia 328 ny isan'ny toerana voamarika ao amin'ny sarintany, ary mihamitombo isan'andro izany isa izany. Afa-mampiasa karoka toerana amin'ny fampiasana fanatatavanana tahaka ny “fisainana miabo,” “fandrenesana miabo,” “jery imaso miabo,” “fofona miabo” ary “tsinapa miabo” ihany koa ny mpiserasera. Izany no ahafahana mitady “sehatra faly” araka izay vavahadin-tsaina enina tian'ny mpiserasera iray ahetsika.
Ohatra, raha te-hahazo aingam-panahy mandritra ny faran'ny herinandro amin'ny toerana miteraka fisainana miabo ianao, dia atolotry ny sarintany ho anao ny fitsidihana ny Nosy Trukhaniv, miorina manakaiky ny afovoan-tanànan'i Kyiv, ary mivoivoy bisikileta ao. Safidy hafa atolony anao ny maka fisaintsainana ao amin'ny torapasika Sahara ao amin'ny tanàna manodidina an'i Kyiv na mitsidika fotsiny ny toerana maka sary mahatalanjon.
Fandehandehanana am-bisikilety ao amin'ny nosy Trykhaniv tsy lavitra ny afovoan-tanànan'i Kyiv. Pikantsary avy amin'ny Map Me Happy.
Vao navoaka iray volana izay ny sarintany, ka mandrisika ny rehetra ny mpamorona hanatevin-daharana ilay fandraisana an-tanana sy hanampy toeram-pahasambarana bebe kokoa ao amn'ny sarintany. Ho fanatanterahana izany dia ty maints mameno fisoratana anarana fohy ny mpisera na mampiasa ny kaontiny Facebook.
Ny tetikasa ifarimbonana dia natsangan'i Nastya Ponomaryova ilay Okrainiana mpanao mari-tanàna sy ireo jeografy avy any Romania, Alemaina ary Holandy, eo ambany fiahian'ny fandaharan'asam-pifanakalozana Mpandraharaha ara-kolonsaina.